torohevitra ara-dalàna | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: toro-hevitra ara-pitsarana
Renivohitra fiterahana ho an'ny zaza fahatelo. Vola alohan'ny nahaterahan'ny zaza fahatelo
Ankehitriny, maro ny ray aman-dreny no liana amin'ny hoe, amin'iza ary amin'ny toe-piainana manao ahoana no omena ny renin-jaza ho an'ny zanaka fahatelo. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny fampahalalana ilainao rehetra. Ny fihevitry ny "renivohitra miteraka"? Ankehitriny ...
Inona no atao hoe famerenana an-tanindrazana? Iza no azo alefa an-tanindrazana ary ahoana no fomba anaovana azy?
Eo amin'ny tontolon'ny politika sy ny orinasa, ny teny hoe "famerenana an-tanindrazana" dia be mpampiasa. Amin'ny heviny inona ary inona no antony anaovana izany matetika? Ny dikan'ilay teny hoe "fampodiana an-tanindrazana" amin'ny lafiny ankapobeny, ny "famerenana an-tanindrazana" dia fiverenana ...
Inona no atao hoe fianakaviana mitaiza? Inona ny fianakaviana mitaiza eo amin'ny sehatry ny lalàna?
Noho ny antony maro dia maro ankehitriny ny ankizy no tavela tsy misy fikarakaran'ny ray aman-dreny sy ny fitiavana. Ny mpiasa ao amin'ny toeram-pialofana dia manao ny zava-drehetra mba hahatsapan'izy ireo ho voaro. Saingy tsy misy mahasolo an'i neny sy i dada. ...
Sainan'ny Irlanda: Mariky ny avaratra sy atsimon'ny Nosy
Irlanda dia firenena iray izay nitolona hatry ny ela ny tolona ho an'ny zon'ny hanana fahaleovan-tena. Mbola mitohy mandraka androany ny dinika mafonja. Noho izany, ny sainan'i Irlandy sy ireo marika hafa dia mety ho ...
Torolàlana momba ny fiarovana ny asa. Fahasalamana sy fiarovana
Ny fiarovana sy ny fahasalamana amin'ny asa dia rafitra iray takiana sy fepetra mikendry ny fiarovana ny fahasalamana sy ny ain'ny mpiasan'ny orinasa. Tafiditra ao anatin'izany ny fanarenana, ny fitsaboana ary ny fisorohana, ny lalàna, ny fandaminana ary ny teknika, ny sosialy-toekarena. Iray ...
Manao ahoana ny endriky ny sainan'i Shina? Ny sandan'ny sainan'i Shina
Ny iray amin'ireo fanjakana taloha indrindra dia i Sina. Zavatra maro izay toa fahita ankehitriny dia avy amin'ity firenena ity - landy, vovoka ary taratasy, ohatra. Ny Sinoa izay, hoy ny mpahay tantara, no voalohany nampiasa ny saina ...
Ny fanerena dia ... Famaritana, karazana ary refy faneriterena
Ny fanerena dia karazana fironana, ary rehefa tsy te hanao zavatra sasany ny olona. Ny fihetsika toy izany izay manery ny olona amin'ny fotoana tsy irina na tsy ekena ho azy ireo aza dia mety ...
Ny fihetsika tsy ara-dalàna dia ... Inona avy ireo masontsivana amin'ny famaritana ny fihetsika tsy ara-dalàna
Ny fitondran-tena tsy ara-dalàna dia fihetsika ataon'ny olona iray vokatr'izany heloka izany. Amin'ity tranga ity dia misy fepetra iray tsy maintsy fenoina. Izany hoe: ny olona iray dia tsy mahafantatra fotsiny ny zavatra nataony, fa koa ...
Herin'ny mpisolovava ambony indrindra
Inona ny fahefan'ny mpisolovava, ho ahy, saika fantatry ny olon-dehibe rehetra. Ity dia antontan-taratasy manamarina ny zony, ohatra, ny fitantanana fitaterana, mba ho solontena amin'ny fikambanana isan-karazany, hanatanteraka asa hafa mifandraika amin'ny asa fanadihadiana. Ny hafa ...
Fanamarinana ara-pahasalamana ho an'ny sekoly fiara
Momba ny karazana taratasy fanamarinana ilaina amin'ny sekoly mamily fiara, dia ho hitan'ny mpirotsaka ho an'ny mpamily na dia alohan'ny fanombohan'ny fiofanana aza. Ity dia antontan-taratasy momba ny fitsaboana. Ilaina ny fanamarinana ara-pahasalamana ho an'ny sekoly mitondra fiara ...
Miala aina ve ny fiterahana? Fialan-tsasatra sy traikefa any Rosia
Ny fahaterahan'ny zaza no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny vehivavy tsirairay. Raha tsara vintana ianao ka bevohoka dia mety manana fanontaniana maro mifandraika amin'ny asa ianao. Manokana, iray amin'ireo lohahevitra mirehitra indrindra ny ...
Lisitry ny 136 ao amin'ny Code of Conduct an'ny Federasiona Rosiana miaraka amin'ny fanehoan-kevitra
Ny fomba famoahana ny karama marina amin'ny mpiasa dia voafaritra amin'ny antsipiriany ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa (manokana: andininy 136). Ity fanontaniana ity dia tototry ny nuansa mamatotra. Ny mpampiasa dia voatery tsy manome vola ho an'ny mpiasa ...
Fomba hahazoana zom-pirenen'i Romania. Nahazo ny zom-pirenena romanianina: antontan-taratasy, vola
Ny pasipaoron'ny olom-pirenenan'i Romania, mazava ho azy, dia lohataona tsara ho an'ireo izay maniry ny ho any amin'ny fanjakana eropeana iray na hafa. Romania, amin'ny maha mpikambana ao amin'ny Vondrona eropeana azy, dia manome fidirana maimaimpoana ho an'ny mponina ao aminy ...
Toro-hevitra momba ny safidy afo: fitsipika fototra
Araka ny asehon'ny antontan'isa dia misy afo mipoaka eto amintsika isaky ny dimy minitra. Olona iray maty ao anaty afo isan'ora, ary manodidina ny roapolo no naratra mafy ary may. Ny tena fototry ny haintrano dia ...
Mamporisika ny fankahalana foko
Amin'izao fotoana izao, be ny resaka miresaka mandranitra fankahalana foko eto amin'izao tontolo izao sy amin'ny firenena tsirairay. Manitsy hatrany ny lalàna mifehy ny heloka bevava ny lalàm-panjakana, mampitombo ny fandraisana andraikitra ...
Inona ny fizotran'ny heloka bevava? Karazan-javatra mandeha amin'ny heloka bevava. Tanjona amin'ny fizotran'ny asan-jiolahy
Ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia iray amin'ny endrika fandaminana ny fiarahamonina. Izy io dia manana asa maro izay manan-danja lehibe eo amin'ny fiaraha-monina. Ny iray amin'ireo lehibe dia ny fiarovana ny fiarahamonina, ny fanjakana ary ny olom-pirenena tsirairay ...
Repoblika Demaokratikana - inona no endrika governemanta? Concept sy karazany, ohatra amin'ny fiarahamonina maoderina
Ny demokrasia no endrika fampandrosoana avo indrindra amin'ny fiaraha-monina. Ny fanapahan-kevitra momba ny fanomezana fahafaham-po ny entana iraisana sy ny tombontsoan'ny vahoaka dia miaraka amin'ny fomba iraisana. Ny fiaraha-monina irery ihany no loharanon'ny fahefana ara-dalàna. Ny ...
Ohatra amin'ny ady amin'ny lalàna heloka bevava
Mifanaraka amin'ny lalànan'ny Federasiona Rosiana, ny fametrahana fifandraisana miteraka antony dia zavatra tsy maintsy atao amin'ny famotopotorana ny asa ratsy. Izy io dia ny fifandraisana misy eo amin'ny zava-nitranga na toe-javatra sasany sy ny valin'ny asa ratsy na ny tsy fanarahana. Toy izany ...
Mivarotra trano tsy latsaky ny 3 taona tompony. Fividianana sy fivarotana trano. Namidy trano
Araka ny fantatrao, ny fidiram-bola amin'ny fivarotana trano isam-batan'olona dia iharan'ny hetra amin'ny fidiram-bolan'ny tena - hetra amin'ny hetra manokana. Rehefa mividy sy mivarotra trano ao amin'ny faritry ny Federasiona Rosiana, amin'ny tranga rehetra dia aloany amin'ny Rosiana ...
Miasa ao amin'ny FSB: ahoana ny fomba hahamety azy?
Ny FSB, amin'ny maha fikambanana izay manao fahaizan-tsaina sy fahiratan-tsaina ary koa miady amin'ny heloka bevava sy ny asa fampihorohoroana dia efa valo ambin'ny folo taona. Ireo teo alohany malaza - ny Cheka, ny NKVD, ny KGB, izay niavian'izy sy ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 150 Next Page
56 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,174.